कान्छि श्रीमती भेट्न भन्दै निस्केका हेमराजको श’ व १७ दिनपछि जंगलमा स’डेको अवस्थामा भेटियो, छोराको शव देखेर आमा वेहोस् (भिडियो हेर्नुस्) – Nepali Taja Khabar
काठमाडौ । चल्लाको औषधी लिन जान्छु भन्दै गत माघ १४ गते घरवाट हिडेका बाँकेका हेमराज खत्री घर फर्किएनन् ।
भोलीपल्ट देखि उनको खोजी थालिएको थियो । हराएको १७ दिन पछि उनको शव जंगलमा फेला परेको छ । श व स डे को अवस्थामा फेला परेको हो ।
घटनास्थल हेर्दा घ टना शं का स्पद भएको आफन्तको दावी छ । घटनास्थल नजिकै मोटरसाइकल र उनको हेलमेट पनि फेला परेको छ । उनी बाइक संगै उनी हराएका थिए ।
उनको बाँया हात चलाउँथे । तर मोटरसाइकलमा उनले हेलमेट दाँया तर्फ देखिएको कारण परिवारले घटना संकास्पद भएको बताएका छन् ।
घटनास्थलमा दुईवटा चाउचाउको खोल, एक पानीको बोतल र सुन्तला पनि भेटिएको घटनास्थलमा पुगेकाहरुले तयार पारेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । सु र्ती जन्य पदार्थ पनि प्रयोग नगर्ने हेमराजको श व नजिक केही सु र्ती जन्य पदार्थको प्याकेट र चु रो टका ठुटो पनि फेला परेको हो ।
दुई वर्ष अघि श्याम कुमारी चौधरीलाई उनले कान्छी श्रीमतीका रुपमा भित्र्याएको गाउँले बताउँछन् । श्यामकुमारीकै घर नजिक भएको जंगलमा शव फेला पर्नु, उनलाई भेट्न भनेर निस्केका हेमराज १७ दिन सम्म हराउनु र घटनास्थलमा देखिएका सामाग्रीले पनि घटना रहस्यमय भएको हेमराजका परिवारको भनाई छ ।
घरयासी ब्यवहारका कारण उनीहरुको छोडपत्र भएको थियो । तर पछिल्लो केही दिन यता उनीहरु भेटघाट समेत गर्न थालेका थिए ।
यो पनि पद्नुहोस; रेखालाई मेरो सम्पत्ती नदिनु भन्दै श्रीमान मुकेशले गरे दे ह त्याग
एजेन्सी । बलिउड नायीका रेखाको जिवन रहस्यले भरिएको छ । उनको नीजि जिवनको बारेमा चासो राख्नेहरु धेरै छन् । तर उनका बारेमा धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरु छन् ।
सुधिर चौधरी-सरकारी पाहुना,चकित राजदूत यान्छी ! बालुवाटार,एयरपोर्ट हुँदै सगरमाथासम्म जि न्यूजको पहुँच
सगरमाथाको नाम रहनुको तथ्य यस्ता छन् ,हाम्रो सगरमाथा माथि भारतको गिद्धे नजर किन ?
दिन भर काम गरेर एक छाक टार्न पनि धौ धौ भएपछि यस्तो काममा लागेकी यि महिलाले अहिले महिनामा कमाउछिन् लाख रुपैँया